Rajada laga qabo Vangölü Express Adventure waa mid Weyn! | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari65 VanRajada laga qabo Vangölü Express Adventure waa mid Weyn!
06 / 12 / 2019 65 Van, Nidaamka Isgaadhsiinta ee Intercity, tareenka, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, Headline, TURKEY
filasho vangolu ah oo ujeedo leh
Tayeynta 'Vangölü Express', oo billowday bishii Janaayo ee sanadkii hore, ayaa si aan joogsi lahayn u sii soconeysey sanadka oo dhan. Van, oo ah barta ugu dambeysa ee hal-abuurka, ayaa u noqday bar-tilmaameedka safarrayaasha taariikhdiisa, quruxdeeda iyo dabeecaddeeda. Interrail oo ay isu yimaadaan si ay u bilowdo koox ka mid ah dadka dhallinyarada ah ayaa ka baxay markii kooxda Turkiga iyo waxa uu noqday yaqaan guud ahaan dalka Turkiga. Ka dib Eastern Express, dhallinta ku soo duulay Vangölü Express waxay u yimaadeen Van iyagoo duulaya sanadka oo dhan.
Wargeyska ShahivanSida uu sheegayo warka ka soo yeeray Meral Yildiz; Tayeynta 'Vangölü Express', oo billowday bishii Janaayo ee sanadkii hore, ayaa si aan joogsi lahayn u sii soconeysey sanadka oo dhan. Van, oo ah barta ugu dambaysa ee hiigsiga, ayaa noqotay barta safarka ee inta badan socotada leh taariikhdeeda iyo quruxdeeda iyo dabeecadeeda. Interrail oo ay isu yimaadaan si ay u bilowdo koox ka mid ah dadka dhallinyarada ah ayaa ka baxay markii kooxda Turkiga iyo waxa uu noqday yaqaan guud ahaan dalka Turkiga. Ka dib Eastern Express, dhallinta ku soo duulay Vangölü Express waxay u yimaadeen Van iyagoo duulaya sanadka oo dhan. Ugu dambeyntii, sanadkii la soo dhaafay lagu qabtay Van dalka Turkiga bishii September Gezginfest adduunka oo dhan oo boqolaal kun oo dhibcood kala duwan ee dabiiciga ah iyo socdaalka dunida ee dadka dhalinyarada ah in Van yimid. Markii la yimid xilligii qaboobaha, Vanls waxay rabaan Vangölü Express inay mar kale noqoto tiirarka dalxiiska. Waxaa lagu nuuxnuuxsaday inuu Van noqon doono magaalada ugu jecel dalxiiska xilliga qaboobaha iyadoo xiisaha sii kordhaya ee Vangölü Express.
2017 waa midka cusub ee ugu cadcad ee muujinta laga helay Lake Van Express, safarka wuxuu ka bilaawday caasimada Tatvan'a ee ujeedka safarka uu ahaa diiradda sanadka ee socotada sanadka oo dhan xilliyo kaladuwan. Waxaa laga yaabaa in jidka aad ku tagtid wadankaaga, laga yaabee meelo cusub oo aad ku baadho, laga yaabee in aad u doontid bariga, ama aad u safarto. Van Lake Express waxay siisaa socotada safar safar. Haddii aad jiifto ama fadhido, waad daawan kartaa idihii daaqayay ee buuraha jooga oo codkoodana maqli kara, oo u toosi kara qorrax dhaca oo u fiirso dabeecadda weligeed is beddeleysa markii aad kafeega kafeegaaga tahay, Anatolia waa safar aad u weyn oo indhahaaga ka gudbaya sida album album ah. Vangölü Express, oo ajandaha saaran inta lagu jiro sanadka 2017, ayaa la door bidaa inbadan gaar ahaan bilaha jiilaalka. Vangölü Express, oo siisa daqiiqado aan la ilaawi karin oo rakaab ah aragtideeda weyneyd, ayaa sii wadi doonta soo dhaweynta dalxiisayaasha sanadkan. Gaar ahaan, dalxiisayaasha Vanlı dalxiisayaasha ayaa doonaya inay qulqulka dalxiisayaasha u soo galaan Van oo ay weheliyaan Vangölü Express halkii ay ka heli lahaayeen reer Iiraan oo tiradooda hoos u dhacaysa xilliga qaboobaha. Dalxiiska Van ee dalxiiska oo furitaanka xilliga qaboobaha waa in la sameeyaa si Van looga dhigo magaaladii ugu jeclaa, ayuu yiri.
TUNÇDEMİR: WAXAAN U BAAHAN TAHAY, gaar ahaan BILOWGA DADKA
Isaga oo la hadlaya wargayska ay khusayso, Abdullah dalxiiska dalxiiska ee Abdullah Tunçdemir, 2 wuxuu bilaabay Vangölü Express sanad ka hor, ajandaha ayaa mar kale yimid si uu u sameeyo dadaal cusub oo uu ku kordhinayo farxad cusub Van, ayuu raaciyay. 2 sano ka hor koox dhalinyaro ah oo hadda noqday Vangölü Express Van ayaa ku sii daray xiisaha ay u qabaan Tunçdemir, gaar ahaan xilliga jiilaalka oo kordhay xiisaha loo qabo tareenka. Tunçdemir wuxuu yiri, waxaan u baahanahay Vangölü Express si aan u qaadno jiilaalka. Waxaan u baahanahay inaan keeno Vangölü Express ajendaha sida Eastern Express anagoo si isdaba joog ah u kordhinayna tirada gawaarida dagaalka. Waan u baahanahay, gaar ahaan bilaha dhintay. Waxaan ubaahanahay Vangölü Express badan si aan ugu noolaano dalxiiska jiilaalka
“VAN LAKE ExPRESS HITS REUTION”
Beyaz The Van Lake express waa mid ka mid ah waxyaabaha loo yaqaan 'sine qua non' ee Dalxiiska Van ee anaga noo yahay Xitaa joogitaanka magiciisa ayaa yeeleysa aragti. Wadooyinka uu ka soo maray Ankara ilaa uu u yimid Van, gaar ahaan xilliga qaboobaha; Xaqiiqda ah inay ka gudubto Keban, Elazığ, Bingöl iyo Muş waxay bixiyaan muuqaal muuqaal sawir leh. Waa goobta safarku si buuxda u raran yahay. Hadafkayaga ugu weyn dabcan waa inaan soo bandhigno qurxinta Van, laakiin ilaa tareenkaas ka baxo Ankara oo uu gaaro Tatvan, waa goobta quruxda badan ee magaalooyin badan. Kuwaas waxaa sii dheer, sawirada halkan lagu soo bandhigay waxbadan oo dad badan lagu gaarey is dhexgalka dadka ayagoo adeegsanaya akoonkooda warbaahinta bulshada. U
“LAMBARKA WAQTIGU WAA INUU KUU SAMEEYAA MUHIIMKA UU MUUJINAYO
Isagoo tilmaamay in marin u helku uu yahay qodobka ugu muhiimsan ee dalxiiska, Beyaz wuxuu sheegay in tirada duullimaadyada ee Lake Van Express la kordhiyo. Tirada duulimaadyada waa in la kordhiyaa, tirada gantaallada waa in la kordhiyaa lana dallacsiiyaa. Iyada oo la tixgelinayo in diyaaraduhu qaali yihiin, tareenka runti waa rakhiis aad u jaban oo wanaagsan. Si tan loo isticmaalo, dabcan, laba maalmood usbuucii naguma filna. Arrinta ugu weyn ee dalxiiska waa helitaan. Meeshu way fiicnaan kartaa laakiin hadaadan halkaa gaarin waxay yeelan doontaa qiimo iyo macno toona. Gaaritaanku waa muhiim. Gaar ahaan xilliga qaboobaha, duulimaadyada ayaa yaraanaya. Mararka qaar xitaa diyaaradaha waa la kansali karaa iyadoo ay ugu wacan tahay duruufaha cimilada ee xun ee ka jira gobollada gobolka. Sababtaas awgeed, tareenka waa hab gaadiid iyo dalxiis. Tani waa in loo qiimeeyaa qaabkan isla markaana loo baahan yahay diyaarinno lagama maarmaan ah in lagu sameeyo tirada duullimaadyada iyo maalmaha.
Waxaa jira afar nooc oo gaari-wacaal ah oo saaran Van Lake Express, oo la mid ah kuwa kale oo la caddeeyo: Pulman, Qufulka daboolan, Sariirta iyo Casho. Gawaarida Pulman waxaa loogu talagalay sidii hal kursi oo hal dhinac ah iyo laba kursi oo kan kale ah sida basaska dhexmara. Waad qaadi kartaa xayawaankaaga rabaayada ah adoo bixinaya kalabar qiimaha tigidhada Pulman, oo ah qaybta keliya ee xayawaannada la aqbali karo. Gawaaridaan waxaa guud ahaan loo adeegsadaa masaafooyinka gaagaaban maxaa yeelay waxay qaadataa ku dhawaad ​​25 saacadood inta udhaxeysa Ankara iyo Bitlis. Qaybtan, 2018 waxaa la siiyaa qofkiiba sannaddii 47.
Fursadda inaad ku Daawato Muuqaalka
Gawaarida ugu raaxada badan ee tareenka waa gaariga hurdada. Gawaarida ugu raaxada badan ee tareenka, oo leh labadaba sariir laba jibbaaran iyo hal qol jiif ah. Maaddaama baabuur-warkani yahay midka ugu badan ee la doorbido, oo ay ku jiraan qaboojiyaha mini, miis dushiisa iyo weelka wax lagu qubo, kuwa raba inay ku safraan gaarigaan waa inay tikidhada kahor iibsadaan. Waxay ku habboon tahay lammaanaha, gaarigu wuxuu kugu deeqayaa wado aamusnaan ah. Qolka laba-qof ka kooban, hal qof waa inuu bixiyaa 2018 lira sanadka 75 iyo qolka-qofka ka kooban waa inaad ku bixisaa lacagta 91. Iyo nooca gaari ee aad kaliya ku isticmaali karto qayb safarkaaga ah; baabuur Markii aad gaajoodo, waad booqan kartaa wadiiqooyinka fudud, cabitaanka, cuntada. Gawaarida cashada, oo ah ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay safarada dhaadheer, waxay ka kooban yihiin miisas leh kuraasta 4. Iyo sababta oo ah ma aha nooca qolka, waxay bixisaa jawi ballaadhan oo si fudud waad daawan kartaa aragtida daaqadaha.
Saldhigga ugu horreeya ee safarku waa Ankara, laakiin shaqooyinka sii socda ee tareenka ayaa socda, tareenka waxaa laga qaadayaa saldhigga Irmak, oo saacad ka fog Ankara. Adiga naftaada halkan ayaad u tegi kartaa haddii aad rabto, waad ku gaadhi kartaa Irmak adoo ka baxaya adeegyadii ka baxayay 1. Maaddaama waqtiga bixitaanka tareenka uu yahay inta lagu jiro maalinta, waxaad bilaabi kartaa inaad daawato muuqaalka sida ugu dhaqsaha badan markaad ku soo dhacdo tareenka. Waa fikrad fiican inaad seexatid oo aad nasato habeenkii maxaa yeelay fursad uma heleysid inaad daawatid muuqaalka habeenkii oo waa inaad hurdo fiican seexdaa si aad u daawato nambarka ugu horreeya ee subaxa hore iyo qorrax soo baxa. Intaa waxaa sii dheer, marka aad ka degto tareenka si aad u sahamiso degmada waxay noqon doontaa danahaaga ugu fiican inaad noqoto mid feejignaan leh.
KHUDBADAHA VANGOLU wuxuu u jeedaa magaalooyin qurxoon
Ankara, Irmak, Yahşihan, Kırıkkale, Bişıh, Çerikli, Sekili, Yerköy, Caferli, Şefaatli, Sarıkent, Karasenir, Kanlıca, Yenifakılı, Himmetdede, Boğazköprü, Kayseri, SarıoŞ Han, lççL Kara Karaı Adag, Dhismaha, Sivas, Taslidere, Bostankaya, Yenikangal, Cetinkaya, Demiriz, Akcamagara, Akgedik, Hekimhan, Malatya, Battalgazi, Yufraad, Kussarayi, Pinarli, Baskil, Naxariis, Yolcati, Elazig, Yurt, Caglar, Ekerek, Suveren, Young, Crane, Nurik, Solhan, Kale, Mus, Hotaksu, Rahova iyo Tatvan.
SAACADAHA TRAVEL 25
Qiyaastii sannadihii 10-15 sano ka hor, tareenadan ma ahayn mid raaxo leh oo si cajiib ah buuq badan, rakaabku si rasmi ah ayey u silceen. Maaddaama uusan jirin xaddidida rarka tareenka, dadku waxay doorteen safarka tareenka wakhtigaas oo alaabada la socota buux-dhaafka ayaa soo saaray ur xun oo tareenka ah. Maalmahan, tareenadan waxaa loo isticmaalaa raaxo waana raaxo. Ku safridda tareenka ee Doğu Ekspres waxay keentay raaxo isbadal lagu yaqaanno dareenkan. Haddii tigidhkaaga iyo diyaarintaada oo dhami ay dhameystiraan, 25 wuxuu kugu sugayaa safar saacad-dheer ah. Safarkan muddada dheer, waxaad ku quudin kartaa naftaada marka aad gaajoodo adoo cunaya marawalooyin. Kars caanka ah mar kale dadka dhallinyarada ah oo u safreysa safar this, kaas oo hadda la soo abaabulay dalka Turkiga iyo adduunka oo dhan in la sameeyo si ay u Van diyaarinta dadka dhalinyarada ah.
60 WAA IN AY CADAALADO, JOOJI DARIIQADA!
Tareenku wuxuu ka socdaa Ankara talaadooyinka iyo axadaha wuxuuna ka gudbaa xarunta 60: Irmak, Yahşihan, Kırıkkale, Bişıh, Çerikli, Sekili, Yerköy, Caferli, Şefaatli, Sarıkent, Karasenir, Kanlıca, Yenifakılı, Himmetdede. Bogazkopru, Kayseri, Sarioglan, Karaozu, Yenicubuk, Ihsanli, Sarkisla, Hanli, Gozmen, Bedirli, Stickure, Sivas, Taslidere, Bostankaya, Yenikangal, Cetinkaya, Demiriz, Akcamagara, Akgedik, Hekimhan, Guga, Baskil, Naxdin, Yolçatı. Elazig, Yurt, Caglar, Muratbagi, Palu, Beyhan, Ekerek, Suveren, Genc, ​​Pike, Nurik, Solhan, Kale, Mus, Hotaksu, Rahova iyo Tatvan. Ha u malayn in Van Lake Express la khiyaaneeyey oo uu aaday Van ilaa maxaa yeelay safarku wuxuu ku dhamaan doonaa degmada Tatvan ee Bitlis. in kastoo Tatvan afjaridda xilliga of baabuur ee la soo dhaafay waday rakaab ah, ugu hadlay dhibaatada baabuur ugu weyn ee Turkiga ee xamuulka doon, ama 20 gudbin karaan halkii baska ee Van.
Safar xiiso leh oo la leh Vangölü Express